June 2017 - Shop
Shop > All Articles > 2017 > June
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်နှစ်တာအတွင်း အကြီးမားဆုံး အွန်လိုင်းမိုဘိုင်းလ်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကို Shop.com.mm နှင့်အတူ Visa နှင့် Ooredoo Myanmar တို့မှ ယူဆောင်လာခဲ့ပြီ0290
The KaungHtet June 24, 2017 9:02 am June 24, 2017
Shop.com.mm ၏ Mobile Week မိုဘိုင်းလ်အထူးဈေးရောင်းပွဲတော်ကို Visa နှင့် Ooredoo Myanmar တို့မှ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးSamsung, Huawei, Sony, Singtech, Lenovo,Xiaomi, Motorola စသည့် အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းများကိုအကောင်းဆုံးဈေး နှုန်းများဖြင့် …
Shop.com.mm together with Visa and Ooredoo Myanmar brings the biggest online mobile sales of the year in Myanmar0328
The KaungHtet June 24, 2017 8:58 am June 24, 2017
Visa and Ooredoo Myanmar join Shop.com.mm Mobile Week Sale, bringing the best prices for the best mobile phone brands Samsung, …
Uptownie 101 : Our Pick of the Week0337
The KaungHtet June 16, 2017 10:03 am June 16, 2017
Hello Pretty Ladies, Uptownie 101 has launched on Shop! Maybe you haven’t heard it in Myanmar; however, it is one …
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Shop.com.mm ၏ မိုဘိုင်းလ်ဈေးရောင်းပွဲတော်အကြောင်း0290
The KaungHtet June 15, 2017 10:59 am June 15, 2017
Shop.com.mm မှ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံးမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအရောင်းပွဲတော်ကြီးကို ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် မကြာခင် ကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၃ရက်နေ့ကနေ ၉ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Mobile Week ပွဲတော်ကြီးမှာ အကောင်းဆုံးဖုန်းတွေကို ဘယ်မှာမှ မရနိုင်တဲ့ အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင် …
Sneak Peak of Shop’s Mobile Week 20170321
Shop.com.mm is about to launch Myanmar’s biggest mobile sales campaign as the second time in Myanmar. Good news for mobile …
လူငယ်တွေကြားမှာ လတ်တလောရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်တဲ့ Fidget spinner လေးအကြောင်း သိပြီးကြပြီလား…0313
The KaungHtet June 14, 2017 7:56 am June 14, 2017
Fidget spinner ဆိုတာက အခုနောက်ပိုင်း အရမ်းခေတ်စားလာတဲ့ ကစားစရာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အရင်တုန်းက နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Yoyo လို ကစားစရာလေးပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုတွေထဲက အကျော်ကြားဆုံးဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းက လူအများအပြားကို ဂယက်ထသွားစေလောက်အောင် နာမည်ကြီးလာပါတယ်။